Ny morontsiraka tsara indrindra amin'ny Ranomasina Mainty any Romania | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | tora-pasika, Romania
Tonga saina aminao ve ny handanianao ny fialantsasatra fahavaratra any Romania? Ity firenena any Eropa ity dia manana morontsiraka tsara tarehy eo amin'ny Ranomasina Mainty misy trano fialan-tsasatra mahafinaritra, toetrandro mafana, torapasika sy tanimboaloboka ary tanàn-dehibe sy tsara tarehy hitsidika azy.
Ny morontsiraka tsara indrindra any Romania dia ireo izay eo anelanelany Mangalia a Mamaia, dia ao no mifantoka ny hotely, ny tolotra aretin-drongony ary ny rafitry ny fizahan-tany indrindra. Manasa anao aho hahita ireo morontsiraka mahafinaritra ireo ary hisafidy azy ireo amin'ny fialan-tsasatrao.
1 Ny morontsiraka Ranomasina Mainty Romanianina
2 Mamaia, malaza indrindra
Ny morontsiraka Ranomasina Mainty Romanianina
Ny moron'ny Ranomasina Mainty Fantatra nandritra ny taonjato maro fa toerana hitsaboana na hanasitranana ireo aretina amin'ny taolana sy ny hoditra, rheumatisme, aretin'ny vanin-taolana na aretin-kozatra ohatra. Ka rehefa mandeha ny fotoana dia maro amin'ireo trano fandraisam-bahiny ireo no voalamina manodidina ny fizahan-tany fizahan-tany na fanafody.
Mbola velona mandraka androany izany tsy misy tsy fahampiana spa Manolotra fandroana fotaka izy ireo izay nalaina mivantana avy amin'ny farihy masira sasany tao amin'ilay faritra ary nahazo laza teo amin'izao tontolo izao.
Etsy ankilany, ny olona izay mandany ny fialan-tsasatra amoron-tsiraka dia afaka ary mitsangatsangana kely any afovoany mba hahalalany azy ary hahita zava-mahatalanjona hafa: ireo monasiteran'i Bucovina, Bucharest taloha na ny delta Danube, ohatra.
Avy eo, ny trano fandraisam-bahiny malaza indrindra dia niparitaka nanakaiky ny 300 kilaometatra ny morontsiraka ary anisan'ireny ny Mamaia, Neptune, Saturn, Venus, Jupiter, Olympus na Eforie Nord, Eforie Sud, Cap Aurora, Costinesti, Vama Veche, ankoatr'izany.
Mamaia, malaza indrindra
Io no toeram-pialofana lehibe indrindra sy malaza indrindra amin'ny morontsiraka romana. Fito kilometatra ny halavany ary eo anelanelan'ny 100 sy 250 metatra ny sakany. Any ankoatry ny fasika no misy ireo hotely kanto mitazana ny ranomasina.
Ny vanim-potoana fahavaratra dia maharitra hatramin'ny fiandohan'ny volana Mey ka hatramin'ny septambra ary ivelan'ny fialantsasatra dia zara raha misy. Eo anelanelan'ny Ranomasina Mainty sy ny Farihy no misy azy Siutghiol ary ho an'ireo daty ireo, ny mari-pana dia manodidina ny 30 ºC mahafinaritra.
Na dia kintana efatra sy dimy aza ireo hotely dia afaka mahita trano mora vidy ianao na mandeha mitoby, nefa mazava ho azy fa tsy ny toerana mora vidina rehetra.
Toeram-pitsaboana spa ity, milamina kokoa noho Mamaia. Eo anelanelan'ny Ranomasina Mainty sy ny Farihy Techirghiol no misy azy, metatra vitsivitsy ambonin'ny haavon'ny ranomasina. Toerana malaza be izy io mandritra ny taona ary mikendry bebe kokoa amin'ny fizahan-tany ao amin'ny fianakaviana satria ny rano amoron-dranomasina dia misy rano tony.
Ny "sanatorium" voalohany dia nanomboka tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-XNUMX ary ny olona dia tonga hatrany mitsabo aretina sasany ka miaina ny fiainana fizahan-tany fizahan-tany. Azonao atao ny manararaotra ny fitsaboana azy ireo, ny fandroana fotaka, ny fampihetseham-batana mampihena ny fihenjanana, ary izany karazan-javatra izany.
Dimy kilometatra miala an'i Eforie Nord ary 19 kilometatra miala an'i Constanta. Toerana fialantsasatra malaza izy io nanomboka tamin'ny 1912 fa Carmen Sylva no anarany avy eo. Mbola mangina aza fa ny zokiny vavy sy ireo arabe tery dia mikoriana mankamin'ny ranomasina.
Ity spa ity dia eo amin'ny toerana avo kokoa noho ny sisa amin'ireo toeram-pialan-tsasatra romana satria avo kokoa ny hantsana misy azy, eo amin'ny 35 metatra eo ho eo izany. Na dia mangina aza izy io dia tsy midika izany fa tsy misy fiainana fizahantany.
Ny tanjona tsara indrindra dia tora-pasika kanto, hatsaran-tarehy misy bara, elo, latabatra sy lounger hankafizanao ny andro. Ary farany, atolotra eto ihany koa ny fitsaboana hatsaran-tarehy miaraka amin'ny fotaka avy ao amin'ny Lake Techirghiol.
Ity toerana fitsangantsanganana amoron-dranomasina ity dia 38 kilometatra miala an'i Constanta, eo amoron'ny ala tokoa toerana maitso io fa tsy ny ambiny.
Misy trano fandraisam-bahiny roapolo ary misy karazany maro ny kafe, fisotroana, trano fisakafoanana sy ny terraces izay anjakan'ny mpizahatany indrindra. Ireo mpizahatany ireo dia sady tanora no antitra miaraka amin'ny fianakaviana hatrizay misy fanatanjahan-tena amin'ny rano, sinema malalaka, fampisehoana teatra ary zaridaina fialamboly.
Spa tena akaiky an'i Neptune izy io ka mahavita iray. Raha raisintsika misaraka dia kely kokoa fa malaza be koa amin'ny fahavaratra.
Vao mainka nalaza io tamin'ny andron'ny kaominisma ary lafo be koa io. Ny olona nasain'ny filoha tamin'izany fotoana izany, Ceausescu, no nanitsaka an'io.
Kilometatra fotsiny ny morontsiraka ary mijanona eo amin'ny helodrano voavaky loaka sy tohodrano. Raha mitady a toerana kely sy mangina tokoa ity no tsara indrindra satria izy no toeram-pisakafoanana kely indrindra eran'i Romania.
Ampy ny trano fisakafoanana, klioba ary trano fisotroana mba hifalifaliana nefa tsy mitabataba.
Tsy ny toerana mafana indrindra amin'ny fahavaratra ary eo anelanelan'ny Jupiter sy Saturne no misy azy. Noho ny toerana misy azy hatreto atsinanana dia misy tara-pahazavana roa ambin'ny folo ora isan'andro dia tsara izany.
Ny fiadanany, ny fanoloran-tena amin'ny fialamboly sy ny aretin-koditra ary ny fanolorana fanatanjahantena rano sy spa izay nahatonga azy io ho spa izay manintona olona lehibe kokoa.
Ny tsio-drivotra dia mamelombelona amin'ny vanin-taona mafana ary mahatratra ny moron-dranomasina misy halavany roa kilometatra voahodidin'ny hotely sy trano fandraisam-bahiny. Izy io koa dia misy villa fizahan-tany roa, ny Delta sy ny Danube, miaraka amin'ny trano manja sy ny fialambolin'izy ireo manokana, ary mahita spa ao anaty hotely sasany koa izahay.
Saturno dia tanàna amoron-tsiraka tena tsara tarehy, misy voninkazo maro eny an-dalambe sy miaraka aminy vidiny mora azo kokoa noho ny mpiara-monina aminy.
45 kilometatra miala an'i Constanta izy io ary ny morony dia voaravaka hantsana avo. Tsy tanàna izany fa tanàna malaza amin'ny tobim-pahasalamany izay manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana aretina sy fikorontanan'ny hoditra sy ny vatana.
Manana manintona ara-tantara izy satria mijoro amin'ny toerana niorenan'ny Callatis Fortress tamin'ny taonjato faha-XNUMX (androany dia manana trano fisakafoanana amin'ny rihana ambany indrindra no iantsoana azy), maro hetsika ara-kolotsaina, ny literatiora, ny fiakarana an-tsehatra, ary amin'ny fahavaratra masoandro amin'ny ora maro.
Tsy toerana mafana be io, kajio izany amin'ny fahavaratra dia tsy mihoatra ny 25ºCKa raha tsy tianao ny onjan'ny hafanana dia toerana tsara ity. Raha ny marina, ny moron-dranomasina rehetra ao amin'ny Ranomasina Mainty any Romania dia toy izao, manana masoandro be nefa tsy mafana mihitsy.
Raha somary hippie ianao na maniry zavatra milamina kokoa dia izao no fialan-tsasatra tsara indrindra satria tanora kendrena. 31 kilometatra miala an'i Constanta izy io ary 800 metatra ny halavany, na dia somary tery aza satria 10 ka hatramin'ny 15 metatra ny sakany.
Matetika dia maro ny mpianatra, ambany ny vidiny, misy hotely kely, trano fanofana fizahan-tany ary toby. Izy io aza dia manana farihy kely, masira ary be fotaka ary entina hitsaboana ny rheumatisme.
Araka ny hitanao dia misy toeran-tseranana fahavaratra maro eny amin'ny moron'ny Ranomasina Mainty any Romania, iray ho an'ny tsiro rehetra ary ho an'ny mpizahatany rehetra: rendrarendra, mangina, hipopotama, ho an'ny fianakaviana manan-janaka ary ho an'ireo mihoatra ny 60 taona.
Ity dia santionany amin'ireo morontsiraka fantany indrindra fa tsy izy ireo ihany. Ny morontsiraka hafa dia Corbu, Vadu, morontsiraka maro mbola tsy simba, Mai mangina, Vama Veche, Cap Aurora ary mitohy ny lisitra. Tsy maintsy misafidy ny toerana alehanao ianao, fa araka ny hitanao Manana tolotra fahavaratra lehibe tokoa i Romania.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Ny morontsiraka tsara indrindra amin'ny Ranomasina Mainty any Romania